🥇အကောင်းဆုံး Forex ရောင်းဝယ်ရေး ပလပ်ဖောင်းများ - ဇန်န၀ါရီလ 2022 တွင် ဘယ်တစ်ခုက အကောင်းဆုံးလဲ။
ဤလမ်းညွှန်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်သည် 2021 နှင့် 2022 တွင် အကောင်းဆုံး Forex ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အထူးသဖြင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ကော်မရှင်များနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုအားလုံးအတွက်အရေးကြီးပုံကိုအထူးပြောဆိုသည်။
ထိုကဲ့သို့သော forex ကဲ့သို့သောမတည်ငြိမ်သောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအရောင်းအဝယ်လုပ်သောအခါ၊ ဤစျေးကွက်သို့သင်ဝင်ရောက်နိုင်မှုကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက်သင့်တော်သောပွဲစားတစ်ယောက်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သြဇာရွေးချယ်စရာထောက်ပံ့ပေးသောစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောပလက်ဖောင်းများ၏ထပ်ဆောင်းဆုကြေးငွေကိုဖော်ပြခြင်းမပြုရ။
ယနေ့ခေတ်တွင် Forex ပွဲစားများရာပေါင်းများစွာရှိသည်။ ၎င်းသည်လိုင်စင်မရှိခြင်း၊ မြင့်မားသောအခကြေးငွေများသို့မဟုတ်ကန့်သတ်ထားသောထောက်ပံ့ထားသောစျေးကွက်အရေအတွက်ဖြစ်ဖြစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကောင်းမွန်သောဘက်စုံရှာဖွေရန်ခက်ခဲသည်။
သုံးသပ်ချက် ၂၀၂၁ အကောင်းဆုံး Forex Trading Platforms
ဆင့် -1 စည်းမျဉ်းရပ်တည်ချက်
ရရှိနိုင် Forex အားလုံးအတွက်
၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံး Forex Trading Platforms များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့အသေးစိတ်ဆွေးနွေးကြပါသည် သင့်ရဲ့ ထည့်သွင်းစဉ်းစား။
၄။ AvaTrade - များစွာသော Techincal Analysis Tools နှင့်အတူအကောင်းဆုံး Forex Trading Platform
ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းရှိအခြားသောအကောင်းဆုံးသော Forex Trading ပလက်ဖောင်းများကဲ့သို့ပင် AvaTrade သည်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပုံနှိပ်ထားသည်။ ရရှိနိုင်သည့်စျေးကွက်များမှာစတော့ရှယ်ယာများ၊ cryptocurrencies, ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် Forex တို့ဖြစ်သည်။ ဒီပလက်ဖောင်းမှာရွေးချယ်ဖို့ကွဲပြားခြားနားသော Forex အတွဲ 50 ကျော်ရှိပါတယ်, ထိုအထက်ပါအဓိက, အသေးစားနှင့်ထူးခြားဆန်းပြားဖုံးလွှမ်း။ အဓိကအားဖြင့်ပျမ်းမျှ ၀.၉ ပျံ့့့့မှုနှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်နိုင်ပြီးစျေးကွက်တို့အဖြစ်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်နိုင်သည်။
AvaTrade ကိုတရားစီရင်ပိုင်ခွင့် (၆) ခုဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တွင်လုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုထားသည်။ ထိုကဲ့သို့သော forex trading platform သည်ဘာသာစကားမျိုးစုံဖြင့်ပံ့ပိုးမှုပေးသည်။ ထို့အပြင်ပွဲစားသည် AvaProtect ကဲ့သို့သောကိရိယာများကိုကမ်းလှမ်းခြင်းဖြင့်လူများအားယုံကြည်စိတ်ချမှုဖြင့်ကုန်သွယ်ရန်အားပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ 'အကာအကွယ်ကာလ' ကုန်ဆုံးသောအခါကစားသမားသည်အရောင်းအ ၀ ယ်အတွက်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်သင့်အားလျော်ကြေးပေးလိမ့်မည်။
သင်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းသူ့ဟာသူတွင်ဤကိရိယာ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးဝင်သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အခါ၎င်းသည်အဆုံးသတ်မဟုတ်ပါ။ ဤထိပ်တန်း Forex ပလက်ဖောင်းသည်စီးပွားရေးညွှန်းကိန်းများနှင့်ဂဏန်းတွက်စက်များ၊ Forex လမ်းညွှန်များနှင့်သင်ခန်းစာများ၊ ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများ၊ ထို့အပြင်သင်မူလ AvaTrade platform ကိုအသုံးပြုလိုပါက software ကို download လုပ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
သင်၏ desktop browser မှတစ်ဆင့်သင်၏ account ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ Forex trade နှင့်လူမှုရေးတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းတို့တွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ AvaTrade မှအခမဲ့သရုပ်ပြအကောင့်သည် virtual ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ နှင့်အတူမိုဘိုင်းနှင့် desktop နှစ်ခုလုံးတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ AvaTrade တွင်သင်သည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြင့်စတင်ပြီးသင်၏အကောင့်ကို debit / credit card သို့မဟုတ် bank transfer ဖြင့်ရန်ပုံငွေယူနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ဖောက်သည်အသစ်များအတွက်၊ AvaTrade သည်အခမဲ့ Forex Trading နည်းဗျူဟာများကို e-book ထုတ်ပေးနေသည်။
Forex အားလုံးအတွက်ကုန်သွယ်ရေးအမှိုက်ပုံကော်မရှင် - အခမဲ့
၃။ Capital.com - အစပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံး Forex Trading Platform
ဤအသစ်စက်စက်-ဖော်ရွေသော Forex ဝန်ဆောင်မှုပေးသူသည် မတူညီသောစျေးကွက် 3,000 ကျော်ရှိ CFDs များနှင့်အတူ rafters များထံ ထုပ်ပိုးထားသည်။ ၎င်းတွင် GBP/USD၊ EUR/USD နှင့် USD/JPY ကဲ့သို့သော အဓိကငွေကြေးကဏ္ဍများမှ FX အတွဲများ ပါဝင်သည်။ AUD/TRY၊ ZAR/JPY နှင့် MXN/JPY ကဲ့သို့သော ထူးခြားဆန်းပြားမှုများကို သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ USD/TRY အတွဲသည် 0.03 pips ဝန်းကျင်တွင် အပြိုင်အဆိုင် ပျမ်းမျှပျံ့နှံ့မှုနှင့်အတူ ပါလာသည်ကို ကျွန်ုပ်တို့ တွေ့ရှိခဲ့သည်။
အမှန်တော့၊ ဤနေရာတွင် ကမ်းလှမ်းမှုတွင် ထူးခြားဆန်းပြားသော ရွေးချယ်မှုကောင်းများ ရှိနေသည်ကို သင်သတိပြုမိပါလိမ့်မည်။ Forex စျေးကွက်၏ သဘောသဘာဝကြောင့် သက်ဆိုင်ရာအတွဲ၏ စျေးနှုန်းနှင့် ပျံ့နှံ့မှုသည် အဆက်မပြတ်နီးပါး အတက်အကျရှိမည်ကို သတိပြုပါ။ ငွေကြေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းသည် CySEC၊ FCA၊ ASIC နှင့် NBRB တို့မှ ဆင်းသက်လာသောကြောင့် ဘေးကင်းရေးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်စရာမရှိပါ။ ထို့အပြင် Capital.com တွင် အခွင့်ကောင်းယူရမည့် ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ ထိုးထွင်းသိမြင်မှုများစွာရှိသည်။ ၎င်းတွင် စီးပွားရေးပြက္ခဒိန်များ၊ webinars များနှင့် အမျိုးမျိုးသော သတင်းများနှင့် အင်္ဂါရပ်များ ပါဝင်သည်။
ကုန်သွယ်ရေးသင်ခန်းစာများ (Forex နှင့်သက်ဆိုင်သောသူများအပါအ ၀ င်)၊ မဟာဗျူဟာများ၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်အချက်အလက်များပါဝင်သော 'Learn to Trade' suite ကိုလည်းသင်အသုံးပြုနိုင်လိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် forex trading platform သည်အခမဲ့ demo account တစ်ခုကိုနှစ်သက်သည်။ အထက်တွင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခဲ့သောအခြား Forex trading platform များကဲ့သို့ပင်သင်အမှန်တကယ်စျေးကွက်အခြေအနေတွင်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုနိုင်သည် - သို့သော်သရုပ်ပြရန်ပုံငွေဖြင့်။
ဤနေရာတွင် 'Standard', 'Plus' နှင့် 'Premier' တို့ပါဝင်သည့်နောက်ထပ်အကောင့် (၃) ခုရှိသည်။ တစ်ခုချင်းစီတွင် 3:1 သြဇာ (တည်နေရာပေါ်မူတည်)၊ အနုတ်လက္ခဏာချိန်ခွင်လျှာကာကွယ်မှု၊ အဆင့်မြင့်ဇယားများ၊ စျေးကွက်အမျိုးမျိုးစသည့်အမျိုးမျိုးသောအခွင့်အရေးများပါ ၀ င်သည်။ နောက်ဆုံးအကောင့်ကိုအဓိကဖြစ်ရပ်များ၊ သီးသန့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်များနှင့်အထူးအကောင့်မန်နေဂျာတို့ဖြင့်ကမ်းလှမ်းသည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်းသည်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာသည်၊ ပွဲစားသည်ငွေချေခြင်းနှင့် debit ကတ်များ၊ ဘဏ်ငွေလွှဲခြင်းနှင့် e-wallets (သင်၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ပေါ် မူတည်၍) လက်ခံသည်။ Capital.com တွင်အနည်းဆုံးအပ်ငွေသည် ၂၀ ဒေါ်လာသာဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်သင်၏ပထမဆုံးသော forex ရောင်းဝယ်ခြင်း (ဘဏ်ငွေအပ်ငွေတွင်အနည်းဆုံး ၂၅၀ ဒေါ်လာအထိမြင့်တက်လျှင်) ပြီးပြည့်စုံသည်။ ထို့ပြင် site သည်သွားလာရလွယ်ကူသောကြောင့်သင်အလိုရှိသောငွေကြေးများကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်အော်ဒါများလေ ၀ င်လေထွက်ကိုရှာဖွေသင့်သည်။
FCA၊ CySEC၊ ASIC၊ နှင့် NBRB တို့မှ လိုင်စင်ရရှိပြီး ထိန်းညှိထားသည်။
ရာသီအလိုက် Forex ကုန်သည်များအတွက်အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမလုံလောကျ
များစွာသောအွန်လိုင်း Forex ပံ့ပိုးသူများကလကိုတုတ်ဖြင့်ကတိပေးသည်နှင့်အမျှလျောက်ပတ်သောပလက်ဖောင်းကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာရမည်ကိုသိရန်ခဲယဉ်းနိုင်သည်။ နောက်ဆုံးတွင် Forex ပေးသူတစ် ဦး ချင်းစီသည်အနည်းငယ်ကွဲပြားသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးမည်၊ စျေးကွက်အမျိုးမျိုးသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးမည်၊
ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက်အကောင်းဆုံး forex trading platform များကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုမရပ်တန့်ခဲ့ပါ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်သုတေသနပြုလုပ်ရာတွင်အသုံးပြုရန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အသုံးဝင်သောစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံး Forex Trading ပလက်ဖောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတစ်လျှောက်လုံးစည်းမျဉ်းအပေါ်ထိမိခဲ့တယ်။ သတိမထားမိသူများအတွက်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောအွန်လိုင်းပွဲစားများသည်လိုင်စင်ကိုရယူရန်နှင့်ကိုင်ဆောင်ရန်အတွက်ကွင်းကိုဖြတ်ကျော်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဖောက်သည်များ၏ရန်ပုံငွေများကိုသီးခြားအဆင့် ၁ ဘဏ်အကောင့်တွင်သိမ်းထားပါ
ဖောက်သည်များအနေဖြင့်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းခြင်းနှင့် KYC (သင်၏ဝယ်သူအားသိရှိခြင်း) လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလိုက်နာပါ
ထို့ကြောင့်အောက်ဖော်ပြပါအဖွဲ့များမှတစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက်ပိုသောလိုင်စင်ချထားပေးသောစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသော Forex Trading ပလက်ဖောင်းများကိုလိုက်နာရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
SEC, CFTC နှင့် FINRA (ယူအက်စ်)
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်တရားစီရင်ရေးနယ်ပယ်များစွာတွင်တည်ရှိပြီး Forex Trading နေရာအားသန့်ရှင်း။ မျှတစွာထားရှိရန်တာဝန်ရှိသည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောသူများသည်စက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်သည်။
ထောက်ပံ့ Forex Pairs
အကောင်းဆုံး Forex Trading ပလက်ဖောင်းများကိုရှာဖွေသောအခါမည်သည့် FX အတွဲများကိုထောက်ပံ့မည်ကိုစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ငါတို့ထိမိသည်နှင့်အမျှငွေကြေးများကိုအတွဲလိုက်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုသည်။ ၄ င်းတို့ကိုအမျိုးအစားခွဲများဖြစ်သောအဓိက၊
ငွေကြေးမြင်ကွင်းအသစ်သို့ရောက်ရှိသူများအတွက် - အကောင်းဆုံး Forex Trading ပလက်ဖောင်းသည်အောက်ပါအမျိုးအစားများကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးလိမ့်မည်။
အဓိကအတွဲများ၏အဓိကလက္ခဏာတစ်ခုမှာ၎င်းတို့သည်ကနေဒါနှင့်သြစတြေးလျဒေါ်လာကဲ့သို့သောခိုင်မာသောငွေကြေးဆိုင်ရာငွေကြေးနှင့်အတူအမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်အမြဲတမ်းပါ ၀ င်နေသည်။
အဓိကကျသော Forex အတွဲအချို့ကိုပိုမိုရှင်းလင်းစွာနားလည်စေရန်အောက်တွင်ကြည့်ပါ။
GBP / USD (ဗြိတိသျှပေါင်)
ယူရို / အမေရိကန်ဒေါ်လာ (ယူရို)
NZD / USD (နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ)
AUD / USD (သြစတြေးလျဒေါ်လာ)
USD / CAD (ကနေဒါဒေါ်လာ)
USD / JPY (ဂျပန်ယန်း)
အဓိက Forex အတွဲများသည်စျေးကွက်တွင်ငွေဖြစ်လွယ်မှုကြောင့်အတင်းတင်းဆုံးပြန့်ပွားမှုနှင့်အတူလာလေ့ရှိသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, အစပြုသူများသည်ဤ pair တစုံအမျိုးအစားနှင့်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်မတည်ငြိမ်မှုနိမ့်ကျနေသည့်အချိန်တွင်စျေးနှုန်းအတက်အကျကြောင့်အမြတ်အစွန်းကိုရယူရန်မှာခြိမ်းခြောက်မှုနည်းသည်။
တစ်ခုခုကိုလမ်း, အကောင်းဆုံး Forex ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းမှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးလိမ့်မယ် အားလုံး အဓိကငွေကြေးအတွဲများ။
အသစ်လေ့လာသူများအတွက်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရကျိုးနပ်နောက်ထပ် Forex pair တစုံအမျိုးအစားအသေးစားအားလုံးအတွက်။ အဓိကငွေကြေးအတွဲများနှင့်မတူဘဲဤတစ်ခုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်လုံးဝမပတ်သက်ပါ။ ၎င်းအစား၎င်းကိုအခြားခိုင်မာသည့် Fiat ငွေကြေးဖြင့်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
မြူများကိုရှင်းလင်းရန်အောက်ဖော်ပြပါလူကြိုက်များသောအသေးစား FX အတွဲအချို့ကိုကြည့်ပါ။
EUR / GPB (ယူရို / ဗြိတိန်ပေါင်)
AUD / CAD (သြစတြေးလျဒေါ်လာ / ကနေဒါဒေါ်လာ)
EUR / AUD (ယူရို / Australianစတြေးလျဒေါ်လာ)
GBP / JPY (ဗြိတိန်ပေါင် / ဂျပန်ယန်း)
EUR / NZD (ယူရို / နယူးဇီလန်ဒေါ်လာ)
EUR / JPY (ယူရို / ဂျပန်ယန်း)
အဓိက Forex အတွဲများနည်းတူအရွယ်မရောက်သေးသူများအနေဖြင့်လည်းတင်းကျပ်စွာပျံ့နှံ့မှုနှင့်မြင့်မားသောငွေဖြစ်လွယ်မှုနှင့်အတူပါရှိသော်လည်းမများပေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကအကောင်းဆုံး Forex Trading ပလက်ဖောင်းများကကမ်းလှမ်းကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် အားလုံး အသေးစားအတွဲများ။
နာမ၌ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း, ထူးခြားဆန်းပြားအားလုံးအတွက်လျော့နည်းအရည်များနှင့်ပိုပြီးမတည်ငြိမ်သောဖြစ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် forex trading platform တိုင်းသည်၎င်းတို့ကိုမတတ်နိုင်ကြောင်းသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည်။
ထိုသတိမထားမိသောသူများအတွက်ထူးခြားဆန်းပြားသောအတွဲများသည်ခိုင်မာသောငွေကြေးအဖြစ်သာမကထွန်းသစ်စငွေကြေးတို့ပါ ၀ င်သည်။ အဆုံးစွန်သောအဘို့, မက္ကဆီကန်ပီဆိုသို့မဟုတ်တူရကီ lira ၏လိုင်းတလျှောက်တွင်စဉ်းစားပါ။
အကောင်းဆုံး Forex Trading ပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင်ကမ်းလှမ်းထားနိုင်သည့်ထူးခြားဆန်းပြားသောအတွဲများစာရင်းကိုကြည့်ပါ။
ကြိုးစား / JPY (တူရကီ lira / ဂျပန်ယန်း)
USD / HKD (အမေရိကန်ဒေါ်လာ / ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ)
CHF / RUB (ဆွစ်ဖရန် / ရုရှားရူဘယ်)
အမေရိကန်ဒေါ်လာ / DKK (အမေရိကန်ဒေါ်လာ / ဒိန်းမတ် krone)
CHF / ZAR (ဆွစ်ဖရန့် / တောင်အာဖရိကရန်း)
အမေရိကန်ဒေါ်လာ / CZK (အမေရိကန်ဒေါ်လာ / ချက်စကား)
မတည်ငြိမ်သောထူးခြားဆန်းပြားသောစွမ်းအားများကအမြတ်အစွန်းများစွာရရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အချို့သော Forex ကုန်သည်များသည်၎င်းတို့ကိုဆွဲဆောင်သည်။ ပြန့်ပွားကျယ်ပြန့်ပါလိမ့်မယ်နေစဉ်, အလားအလာဆုလာဘ်မကြာခဏဒီကျိုးနပ်ပါစေ။ တနည်းကား၊ သင်သည်အစပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပါကသင်၏ခြေထောက်ကိုမတွေ့မချင်းသေးငယ်သောနှင့်အဓိကအတွဲများအားကုန်သွယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Forex trading platform ဖြင့်စာရင်းသွင်းခြင်းမပြုမီမည်သည့်အခကြေးငွေကိုမဆိုသတိထားရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးအများဆုံးအခကြေးငွေအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ကိုကြည့်ပါ။
ပျံ့နှံ့ခြင်း, သတိမထားမိသောသူတို့အဘို့, ငွေကြေး pair တစုံ၏ဝယ်စျေးနှုန်းနှင့်ရောင်းစျေးနှုန်းအကြားကွာဟချက်ဖြစ်ပါတယ်။
သင် EUR / GBP ရောင်းနေတယ်ဆိုပါစို့
အဆိုပါ ဝယ်ခြင်း စျေးနှုန်း $ 0.8655 ဖြစ်ပါတယ်0
အဆိုပါ ရောင်းချ စျေးနှုန်း $ 0.8655 ဖြစ်ပါတယ်2
ဤသည်2pips တစ်ပြန့်ပွားသည်
အရေးကြီးသည်မှာသင်သည်ဤအရောင်းအဝယ်စတင်ခြင်းသည်အနီရောင် ၂ ခုဖြစ်သွားသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်အွန်လိုင်းပွဲစားမှကောက်ယူသောသွယ်ဝိုက်ကြေးဖြစ်သည်။ ကဲ့သို့သောဘာမှ ကျော်လွန်2pips Forex ကုန်သွယ်မှုကနေအမှန်တကယ်အမြတ်အစွန်းဖြစ်လိမ့်မည်။
eToro ကဲ့သို့သောအကောင်းဆုံး Forex trading platform များသည်ကော်မရှင်မှအခမဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်အတူအဓိကနှင့်အသေးစားအတွဲများ၌ ၁ ပေသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသောပြန့်နှံ့မှုများကိုကမ်းလှမ်းသည်။
အွန်လိုင်းပွဲစားများသည်စျေးကွက်ထဲ ၀ င်ခြင်းနှင့်ထွက်ခွာခြင်းအတွက်ကော်မရှင်များကိုကောက်ခံသည်။ ထို့ကြောင့်စျေးနှုန်းနိမ့်ကျသည့် Forex trading platform နှင့်အထက်ပါစံသတ်မှတ်ချက်များကိုရှာဖွေရန်ကောင်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်တွေ့ရှိချက်များအရ Forex ပံ့ပိုးပေးသူများ၏အမြတ်အများစုသည်ကော်မရှင်အခကြေးငွေအမျိုးမျိုးကောက်ခံကြသည်။ ဤသည်တိုတောင်းသောကာလကုန်သည်များနှင့်ပိုပြီးသဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲစားက ၂% ကော်မရှင်ကြေးပေးတယ်ဆိုပါစို့
သင်သည် USD / JPY တွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ၀ ယ်ရန်အမှာစာတင်သည်
သင် FX အနေအထားကိုဝင်ရန် $ 20 ပေးရမည် ($ 1,000 x 2%)
ငွေသားထုတ်ယူလျှင် USD / JPY ကုန်သွယ်မှုမှာဒေါ်လာ ၁၄၀၀ ဖြစ်သည်
သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုရပ်တန့်ရန်သင် ၂% ကော်မရှင်ထပ်မံပေးရပါမည်။ ၎င်းသည်ဒေါ်လာ ၂၈ ($2x 28%) နှင့်ညီသည်။
စုစုပေါင်း, သင်ကုန်သွယ်မှုဝင်နှင့်ထွက်ရန် $ 48 ပေးဆောင်
မကြာမီအခကြေးငွေများသည်သင်၏အကျိုးအမြတ်ကိုလျော့နည်းသွားစေနိုင်သည်။ ထို့အပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သောကော်မရှင်၏အခကြေးငွေထက်ပိုကောင်းသည့်တစ်ခုတည်းသောအရာမှာလုံးဝမရှိပါ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်း Forex trading platform eToro တွင်သင်သည်ဤကုန်သွယ်ရေးတွင်ဒေါ်လာ ၄၈ ဒေါ်လာကိုစုဆောင်းနိုင်လိမ့်မည် - ပွဲစားသည်ကော်မရှင်မရှိသဖြင့်။
အကောင်းဆုံး Forex Trading ပလက်ဖောင်းများတွင်မှတ်ထားရမည့်အခြားအခကြေးငွေများမှာ -
တစ်ညတည်းငွေကြေး Forex CFDs ကိုစိတ်ဝင်စားသောသူများအတွက်သင်သည် swap / rollover အခကြေးငွေများဟုခေါ်သည့်တစ်ညချင်းငွေကြေးပေးဆောင်ရမည်။ ဤသည်ကိုသင်ကုန်သွယ်မှုဖွင့်လှစ်ထားသည့်နေ့တိုင်းအတွက်နေ့စဉ်ပေးချေသည်။ eToro သည်အမှာစာပုံစံတိုင်းအတွက်နေ့စဉ်အခကြေးငွေမည်မျှပေးမည်ကိုရှင်းလင်းစွာဖော်ပြထားသည်။ သင်ပေးရမည့်ငွေပမာဏသည်ကုန်သွယ်မှုရှိသည့်အရောင်းအ ၀ ယ်နှင့်အစုရှယ်ယာ / သြဇာ၏အရွယ်အစားပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဤနှုန်းသည်တနင်္ဂနွေတွင်အနည်းငယ်မြင့်မားလိမ့်မည်
ပလက်ဖောင်းအခကြေးငွေ: ပွဲစားများအားလုံးကွဲပြားသော်လည်းအချို့သည်ပလက်ဖောင်းခကောက်ခံနိုင်သည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်သင်ပူးပေါင်းရန်စဉ်းစားနေသောမည်သည့် Forex trading platform တွင်မဆိုအခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံကိုစစ်ဆေးရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ အချို့ကသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည့်အရင်းအနှီးအပေါ် အခြေခံ၍ လစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်ကြေးကောက်ခံနိုင်သည်။
ငွေသွင်း / ထုတ်ယူခြင်း သတိထားရမည့်နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုမှာမကြာမီတွင်ထပ်မံတိုးပွားလာမည့်ငွေသွင်းခြင်းနှင့်ငွေထုတ်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ အချို့သော Forex ပေးသူများသည်သိုက်များနှင့်ငွေထုတ်ရန်အတွက်အားသွင်းသည်။ ထို့ကြောင့်ပွဲစားနှင့်အမြဲဆက်သွယ်ပါ။
သင်မြင်သည်အတိုင်း, အခကြေးငွေများနှင့်ကော်မရှင်များကိုနားလည်ရန်ရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ် - ဒါကြောင့်သူကအားသွင်းသောအရာကိုအပေါ်ပွင့်လင်းသော Forex ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံး။
Forex ပွဲစားအများစုသည်သင့်အား၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် web-platform မှတစ်ဆင့် ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းချခွင့်ပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သော ၀ ဘ်ဆိုဒ်များသည်များသောအားဖြင့်အစပြုသူများအတွက်လွယ်ကူစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
အကယ်၍ သင်သည်အတွေ့အကြုံရင့်သော Forex ကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်လျှင်နည်းပညာဆန်းစစ်မှုနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများအတွက်သင်ပိုမိုလိုအပ်လိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံး Forex Trading ပလက်ဖောင်းများသည် MT4 /5သို့မဟုတ် cTrader ကဲ့သို့သော third-party software များနှင့်သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလေ့လာရန်သို့မဟုတ် MT4 ဆော့ဝဲလ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်လများစွာကုန်လွန်ရန်စိတ်ကူးမရရှိလျှင် eToro တွင် Copy Trader အင်္ဂါရပ်ကိုသင်စမ်းချင်ပေမည်။ ကျနော်တို့မကြာမီ Forex ကုန်သွယ်ရန်ဤ passive နည်းလမ်းအကြောင်းပြောဆို။
အကောင်းဆုံး Forex Trading ပလက်ဖောင်းများမှပေးသောကိရိယာများနှင့်အင်္ဂါရပ်များသည်သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်ကူညီလိမ့်မည်။
ကကမ်းလှမ်း features တွေရှိပါတယ် အချို့သော သင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်း - ထုတ်လုပ်မှုအလားအလာကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်သင် passively ကုန်သွယ်ခွင့်ပြုထားတဲ့အွန်လိုင်းပွဲစားများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Forex Trading ပလက်ဖောင်းပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းတွင်လူမှုရေးနှင့်ကူးယူရောင်းဝယ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအားကျွန်ုပ်တို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
eToro သည်လူမှုရေးအရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်အား Forex ကုန်သည်များ၏ပို့စ်များကို 'ကြိုက်'၊ 'လိုက်' နှင့် 'မှတ်ချက်ပေးရန်' ခွင့်ပြုသည်။ ပွဲစား၏ထူးခြားချက်မှာ Copy Trader tool ဖြစ်သည်။ ရရှိနိုင်သည့်အချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေခြင်းဖြင့်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော Forex ကုန်သည်တစ် ဦး ကိုရှာပါ။ ၎င်းတွင်ပိုမိုနှစ်သက်သောပိုင်ဆိုင်မှုများ၊ သမိုင်းဆိုင်ရာကုန်သွယ်မှုအချက်အလက်များနှင့်စွန့်စားမှုအဆင့်စသည်တို့ပါဝင်သည်။
ထို့နောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်ငွေပမာဏကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့နောက်မည်သည့်ငွေကြေးကို ၀ ယ်သည်ဖြစ်စေသင့်ကိုယ်ပိုင်အစုစုတွင်ပြသလိမ့်မည်။ သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသော Copy Trader တွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်
Forex pro သည်သူတို့၏အစုရှယ်ယာ၏ ၂% ကို USD / HKD နှင့် ၃% ကို NZD / USD သို့ထည့်သည်
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အစုစု၏ 5% ကိုလည်းဤနှစ်ခုစွမ်းအပေါ်လောင်းကြေးဖြစ်ပါတယ်
အကယ်၍ အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်သည် NZD / USD ဖြင့်ငွေရှင်းလျှင်၊
အကယ်၍ ၎င်းသည် ၁၀% အမြတ်အစွန်းရရှိခဲ့လျှင်သင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည့်ပမာဏနှင့်ညီမျှသည် - သင်လည်းအလားတူပြုလုပ်လိမ့်မည်!
သင်မြင်သည်အတိုင်း, ဤသည်ငွေကြေးဆိုင်ရာစျေးကွက်များသို့ ၀ င်ရောက်နိုင်ရန်စောင့်ဆိုင်းခြင်းဖြစ်သည်၊ နည်းပညာဆိုင်ရာဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း၏ကောင်းကျိုးများကိုသင်ကိုယ်တိုင်လေ့လာရန်မလိုပါ။
သင်သိသည့်အတိုင်းသြဇာသည်သင်၏အကောင့်ထက်ပိုသောကုန်သွယ်မှုကိုအခွင့်အရေးပေးသည်။ သင့်အားကမ်းလှမ်းမည်ဆိုပါကမည်မျှသြဇာသက်ရောက်သည် (သင်နေထိုင်သည့်နေရာ၊ သင်ရောင်းဝယ်နေသောကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်တွဲဖက်မှုနှင့်သင်၏လောင်းကြေးပမာဏ) စသည့်အချက်များပေါ်တွင်မူတည်သည်။
အကယ်၍ သင်ကအမေရိကန်မှဖြစ်လျှင်၊ သင်သည် Forex အတွဲများအားသြဂုတ် ၁:၅၀ အထိကုန်သွယ်နိုင်သည်
သြစတြေးလျတွင်ဥရောပနှင့်ဗြိတိန်နိုင်ငံများတွင်အဓိကကျသော FX အတွဲများနှင့် ၁း၂၀ အထိအသေးစားအတွဲများအတွက် ၁း၃၀ ကိုသြဇာပေးမည်။
သြဇာကိုအချိုးတစ်ခုသို့မဟုတ် 1:2or x2, 1:10 or x10, 1:20 or x20 စသည့်မျိုးစုံအဖြစ်ပြသနိုင်သည်။
1:30 ၏သြဇာကိုဆိုလိုသည်ကသင်သည်အဓိက pair တစုံတွင်ဒေါ်လာ ၁၀၀ အထိဒေါ်လာ ၃၀၀၀ အထိမြှင့်တင်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်
ထို့ကြောင့်အသေးစားသို့မဟုတ်ထူးခြားဆန်းပြားသောစုံတွဲတစ်တွဲအတွက်ဒေါ်လာ ၁၀၀ အစုရှယ်ယာ ၁:၂၀ ထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်ဒေါ်လာ ၂,၀၀၀ အထိလောင်းနိုင်သည်။
သင်၏အနေအထားကိုသြဇာရှိအောင်တိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်သင်သည်အမြတ်အစွန်းကိုတိုးပွားစေသည် if ကုန်သွယ်ရေးအောင်မြင်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုသည်မှာငွေကြေးစုံတွဲသည်အခြားတစ်နေရာသို့သွားလျှင်သင်၏ဆုံးရှုံးမှုများကိုလည်းပိုမိုကျယ်ပြန့်စေလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ ထိုအရာနှင့်အတူသင်ရွေးချယ်ထားသည့် Forex trading platform ၌သြဇာသက်ရောက်သည့်အခါသတိထားသင့်သည်။
အကောင်းဆုံး Forex Trading ပလက်ဖောင်းများကိုရှာဖွေသောအခါ - မည်သည့်နည်းပညာညွှန်းကိန်းများ (ရှိခဲ့လျှင်) ကိုသင်ရရှိနိုင်ကြောင်းလေ့လာရန်အကြံပြုသည်။
ညွှန်းကိန်းများနှင့်ဇယားများကသင့်အားအတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်အတိတ်နှင့်ပစ္စုပ္ပန်စျေးနှုန်းပြောင်းလဲမှုများကိုပြသသည့်အရာမရှိလျှင်သင်လည်းလှေပစ်လိုက်နိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နည်းပညာညွှန်းကိန်းများကမည်သည့် ဦး တည်ချက်ကို ဦး တည်နိုင်သည်နှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်သင့်အားအထောက်အကူပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းတွင်ပါ ၀ င်မှုသည်သင်ရေးဆွဲသောပမာဏ၊ ငွေဖြစ်လွယ်မှု၊ မတည်ငြိမ်မှု၊ စျေးနှုန်းနှင့်အခြားဇယားဆွဲကိရိယာများကိုလေ့လာခြင်းကိုမြင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအကောင်းဆုံး Forex Trading ပလက်ဖောင်းအချို့သည်သင်၏အကောင့်ကို MT4 နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်နှင့်ကိရိယာများ၊ ညွှန်းကိန်းများနှင့်ဇယားကွက်များသို့ချိတ်ဆက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။
သင့်တွင်တိကျသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းတစ်ခုရှိပါကထိုဝန်ဆောင်မှုပေးသူလက်ခံသည့်အရာကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ရိုးရာပုံစံအွန်လိုင်းပွဲစားများသည်ဘဏ်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကိုသာလက်ခံသည်။
သို့သော်အထူးသဖြင့်သင်၏ကုန်သွယ်မှုအကောင့်တွင်ဘဏ်ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းသည် ၂ ရက်နှင့်တစ်ပါတ်အကြားကြာမြင့်နိုင်ပြီး၎င်းသည်သင်၏ကြိုးစားအားထုတ်မှုများကိုအချိန်အတန်ကြာနှောင့်နှေးစေလိမ့်မည်။ အကောင်းဆုံး Forex Trading ပလက်ဖောင်းများသည်မြန်ဆန်ပြီးခေတ်မီသောငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများဖြစ်သောအကြွေးနှင့်ဒက်ဘစ်ကတ်များနှင့် e-wallets များကိုလက်ခံသည်။
eToro သည် PayPal, Skrill နှင့် Neteller တို့ပါ ၀ င်သောအရာအားလုံးကိုလက်ခံသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏အမေရိကန်ဒေါ်လာကို အသုံးပြု၍ သင်၏အကောင့်ကိုငွေကြေးမထောက်ပံ့ပါကပွဲစားသည်ငွေလဲလှယ်ခကိုကောက်ခံသည်။ သို့သော်ဤသည်မှာ ၀.၅% မျှသာဖြစ်ပြီး၊ ပေးသူသည် Forex trades အားလုံးတွင်ကော်မရှင် ၀ င်ငွေ 0.5% ပေးသည်ကိုသတိရသင့်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အတွေ့အကြုံရှိကုန်သည်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး၊ ဤလုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏ကောင်းကျိုးများကိုသိပြီးဖြစ်လျှင်၊ ပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းအမြစ်များကိုကျော်သွားချင်ပေမည်။ သို့သော်လူသစ်များအတွက်ထိုပစ္စည်းသည်ကြိုးများကိုသင်ယူခြင်း၏တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောအပိုင်းဖြစ်သည်။
ပွဲစားတစ်ခုစီသည်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းပြုစုသောအကောင်းဆုံး Forex Trading ပလက်ဖောင်းတစ်ခုစီသည်ပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုကမ်းလှမ်းထားသည် - အတွေ့အကြုံမရှိသော Forex ကုန်သည်များကိုကူညီရန်ရည်ရွယ်သည်။
Forex Trading Platform ဖြင့်စတင် - Walkthrough
သင်၏ Forex trading platform သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လိုအပ်ချက်များနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သောဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသည်နှင့်စတင်နိုင်သည်။
ဒီလမ်းလျှောက်ထွက်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာ Capital.com ကိုဘယ်လိုဝင်ရောက်ရမယ်ဆိုတာကိုသင်ပြပေးနေပါတယ်
- ပလက်ဖောင်းသည်သင့်အားများစွာသော Forex အတွဲများကိုကော်မရှင်မှကုန်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။
အဆင့် ၁ - အကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ
Capital.com သို့ သွား၍ 'Join Now' ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏အမည်နှင့်အခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်ပါ - sign-up box ထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်း။
၎င်းကိုသင်၏မိုဘိုင်းစက်သို့မဟုတ်ပင်မ Desktop ဝက်ဘ်ဆိုက်မှပြုလုပ်နိုင်သည်။
KYC အရ၊ သင်သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်လိုအပ်သည်။ Capital.com
ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်သို့မဟုတ်နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုဓာတ်ပုံအထောက်အထားအဖြစ်လက်ခံသည်။ လိပ်စာအထောက်အထားနှင့်ပတ်သက်သောအခါလတ်တလော utility bill သို့မဟုတ်တရားဝင်ဘဏ်စာရင်းတစ်ခုကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည် - ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လျှင် scan ဖတ်သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်မိတ္တူကောင်းသည်။
သင်သည်စာရွက်စာတမ်းများတင်ခြင်းကိုမျဉ်းကြောင်းထပ်မံမချန်မချင်းထားခဲ့နိုင်သည်။ ငွေထုတ်ရန်တောင်းဆိုခြင်း (သို့မဟုတ်ဒေါ်လာ ၂,၂၅၀ ထက်ပိုသောငွေဖြည့်သွင်းခြင်း) မပြုမီသို့သော်ဤပြီးစီးမှုကိုသတိပြုပါ။
ငွေပေးချေမှုအမျိုးအစားအမျိုးမျိုးရှိသောကြောင့် Capital.com တွင်ငွေသွင်းရန်လွယ်ကူသည်။
အဆင့် ၄။ Forex Pair ကိုရှာပါ
သင်၏အကောင့်ကိုအတည်ပြုပြီးပြီဖြစ်သောကြောင့်ကုန်သွယ်ရန်အတွက် Forex စုံတွဲကိုရှာနိုင်သည်။
သင်ရှာဖွေလိုသောအကွက်ထဲတွင်မည်သည့်အတွဲကိုမဆိုကူးယူလိုပါကစတင်ရိုက်ပါ။ ၎င်းကိုတွေ့သည့်အခါ 'Trade' ကိုနှိပ်ပါ။ ဥပမာပြရရင်ယူရိုငွေကိုသြစတြေးလျဒေါ်လာနဲ့ရောင်းချင်တယ်။
သင်ဆုံးဖြတ်ရန်မဖြစ်သေးပါကဘယ်ဘက်ရှိ Trade Markets ကိုနှိပ်ပါ။ နောက်ပြီး 'ငွေကြေး' ကိုနှိပ်ပါ။ ဘယ်အချိန်မှာရရှိနိုင် Forex စျေးကွက်အားလုံးသင်၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ပြသလိမ့်မည်။
သင်ရွေးချယ်ထားသောငွေကြေးအတွဲအနားရှိ 'ကုန်သွယ်ရေး' ကိုနှိပ်ပြီးလျှင်အမှာစာပေါ်လာလိမ့်မည်။
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာကဆုံးဖြတ်ရန် ဝယ်ခြင်း နှင့် ရောင်းချ အမိန့်။ သင်ငွေလဲနှုန်းလိမ့်မယ်ထင်လျှင် တက် - ရွေးပါ ဝယ်ခြင်း။ တနည်းအားဖြင့်သင်တိုတောင်းလိုလျှင်ရွေးချယ်ပါ ရောင်းချ
သင်၏အစုရှယ်ယာကိုဝင်ပါ၊ သင်၏သွင်းအားစုများနှင့်သင်ပျော်ရွှင်သည်နှင့်တပြိုင်နက် 'Open Trade' ကိုနှိပ်ပါ။ ထိုသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်၊ Capital.com သည်သင်၏အမှာစာကိုအပြည့်အ ၀ ဆောင်ရွက်ပေးလိမ့်မည်
အကောင်းဆုံးကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများ - စီရင်ချက်လား။
ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကုန်သွယ်ရေးနာရီများနှင့်ငွေဖြစ်လွယ်မှုမြင့်မားခြင်းကြောင့်ဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသော Forex များသည်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလက်များကိုပြောင်းလဲပစ်လိုက်ခြင်းသည်အံ့သြစရာမဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်ရာနှင့်ချီသောအွန်လိုင်းပွဲစားများသည်အာကာသအတွင်းထိပ်တန်းနေရာအတွက်ရုန်းကန်နေကြရသည်။
အကောင်းဆုံး Forex Trading ပလက်ဖောင်းများကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများချမှတ်လိမ့်မည်၊ ငွေကြေးအစုအဝေးများအပေါ်တင်းကျပ်စွာပြန့်ပွားနိုင်သည်။ Capital.com
ဤအချက်၌ ပျံသန်းနေသော အရောင်များဖြင့် ဖြတ်သန်းပါ။ ပွဲစားကို FCA၊ ASIC၊ CySEC၊ နှင့် NBRB မှ ထိန်းချုပ်ထားပြီး အပြိုင်အဆိုင် ပျံ့နှံ့မှုများနှင့်အတူ Forex အတွဲပေါင်း 50 ကျော်ကို ဝင်ရောက်ခွင့် ပေးပါသည်။
ဤလေးစားခံရသည့်ပွဲစားသည် ZERO ကော်မရှင်ကိုကောက်ခံပြီး Copy Trading ကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များနှင့်အစပြုသူများအတွက်အသုံးဝင်သောပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကိုပေးသည်။ ၁၀ မိနစ်မပြည့်ခင်စတင်ပါ၊ virtual ရန်ပုံငွေဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀၀ ဖြင့်အခမဲ့ Forex သရုပ်ပြအကောင့်ကိုစတင်စမ်းပါ။
ပွဲစားတစ် ဦး နှင့်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်သောအခါသင်၏ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းများကိုပံ့ပိုးရန်အခမဲ့ forex အချက်ပြ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြင့် sign up လုပ်ပါ။ ၎င်းသည်နည်းပညာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး မပါဘဲကောင်းမွန်သောကုန်သွယ်မှုအခွင့်အလမ်းပေါ်ပေါက်လာသောအခါသင့်အားသတင်းအချက်အလက်များပေးလိမ့်မည်။ သင်ပူးပေါင်းနိုင်သည် အကောင်းဆုံး forex အချက်ပြကြေးနန်း ကျွန်ုပ်တို့၏ website မှတဆင့်အခမဲ့
အစပြုသူတွေအတွက်အကောင်းဆုံး Forex Trading ပလက်ဖောင်းကဘာလဲ။
ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်တွေ့ရှိချက်အရအစပြုသူများအတွက်အကောင်းဆုံး forex trading platform သည် eToro ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းပွဲစားကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေသတ်မှတ်ထားပြီးတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပြန့်ပွားနေတဲ့ Forex အတွဲတွေ၊ လူသစ်တွေအတွက်ပညာရေးဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေပြည့်နှက်နေတဲ့ကုန်ကြမ်းအစုံအလင်ကိုပေးထားတယ်၊ ပြီးတော့သင်ဟာမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာစတင်နိုင်ပါတယ်။
ငါ Forex ကုန်သွယ်ထံမှကြွယ်ဝသောရနိုင်မလား?
သင်ချမ်းသာလာသည်ဖြစ်စေမရသည်မှာအမျိုးမျိုးသောအချက်များပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ အရေးကြီးသည်မှာဈေးနှုန်းကြီးမြင့်ခြင်း၊ ကျဆင်းခြင်းကိုမှန်ကန်စွာကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့်သင်ရွေးချယ်သောအွန်လိုင်း Forex ပွဲစားများနှင့်ဆက်စပ်နေသောအရောင်းအ ၀ ယ်ကိုမှန်ကန်စွာမခန့်မှန်းနိုင်လျှင်အရေးကြီးဆုံးမှာသင်ငွေရှာမည်မဟုတ်ပါ။
အကောင်းဆုံး All- ပတ်ပတ်လည် Forex ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းကဘာလဲ?
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်အကောင်းဆုံးAll-န်းကျင် Forex Trading ပလက်ဖောင်းသည် eToro ဖြစ်သည်။ အွန်လိုင်းပွဲစားကို FCA, CySEC နှင့် ASIC တို့ကထိန်းချုပ်ထားသည်။ ကော်မရှင်မပါသောကုန်သွယ်မှုဖြင့် Forex အတွဲ ၅၀ ကျော်ကိုကမ်းလှမ်းသည်။ ကျွမ်းကျင်မှုအားလုံးအတွက်လွယ်ကူသည်။ ထို့အပြင်၊ များသောအားဖြင့် credit / debit cards သို့မဟုတ် Skrill နှင့် PayPal ကဲ့သို့ e-wallets များ အသုံးပြု၍ မှတ်ပုံတင်ရန် ၁၀ မိနစ်ထက်နည်းပါသည်။
Forex Trading ပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်တဲ့အခါဘယ်မက်ထရစ်ကိုစစ်ဆေးရမလဲ။
Forex Trading ပလက်ဖောင်းကိုထိန်းညှိထားရန်အရေးကြီးသည်။ မည်သည့် Forex အတွဲများ၊ သင့်ထံမှမည်သည့်အခကြေးငွေများ၊ ကော်မရှင်များနှင့်မည်သည့်ငွေပေးချေမှုပုံစံများကိုလက်ခံလိမ့်မည်ကိုလည်းသင်စစ်ဆေးသင့်သည်။ Forex trading မဟာဗျူဟာများကိုကျင့်သုံးရန်အတွက်အခမဲ့ demo account ကိုမည်သည့်ကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများကကမ်းလှမ်းမည်၊
ငါ Forex ကုန်သွယ် $ 100 နှင့်အတူစတင်နိုင်သလား?
အနိမ့်ဆုံးလောင်းကြေးသည် Forex trading ပလက်ဖောင်းများအကြားကွဲပြားလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ယောက်ချင်းစီတွင်အချက်အလက်အားလုံးကိုလေ့လာခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။ ဥပမာ AvaTrade တွင်အနည်းဆုံးအပ်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀ ဖြစ်သည်။ Capital.com မှာဒေါ်လာ ၂၀ သာနည်းတယ်။